Soosaarayaasha & Alaab-qeybiyeyaasha Qaata Fibreerka | Shiinaha Fiber optical aqbalana Factory
ZBR1001J Buugga qaataha indhaha
1. Soo Koobid Wax soosaar ah ZBR1001JL qaataha indhaha waa kii ugu dambeeyay ee qaata indhaha 1GHz FTTB. Iyada oo leh awood ballaaran oo muuqaal ah, heer wax soo saar sarreeya iyo adeegsiga tamarta yar. Waa qalabka ugu habboon ee lagu dhisi karo shabakadda waxqabadka sare ee NGB. 2. Astaamaha Waxqabadka technique Farsamo aad u fiican oo farsamaynta xakamaynta AGC ah, marka kala duwanaanta awoodda korantadu tahay －9 ～ ＋ 2dBm, heerka wax soo saarka, CTB iyo CSO asal ahaan isma beddelin; Frequency Soo noqnoqoshada shaqeynta ee loo kordhiyay 1GHz, Qaybta kordhiyeyaasha RF waxay korsaneysaa hi ...
EATURES ■ xPON Waxay Dhex Martay C AGC Function ■ Hawl Furaha Qaabka ■ Waxay taageertaa DOCSIS 3.0 ama 3.1 ■ Muujiyeyaasha Tamarta ee Power ON, Ikhtiyaar Ikhtiyaar ah iyo Soo Celinta Tx ■ -20dB Imtixaanka ■ 12VDC Adapor Power ■ Raacaysa heerarka SCTE 174 Codsiyada ■ CATV, shabakadaha HFC RF over Glass Description PL10-4A optical node node waa meesha ugu haboon ee loogu adeegsan karo shabakadaha FTTH iyo FTTB, iyadoo la gaarsiinayo DOCSIS kor iyo hoosba, codka, muuqaalka iyo adeegga xogta xawaaraha sare leh ee codsiyada FTTX. PL10-4A waxay leedahay otomaatig ...
ZHR1000SD FTTH Aqbaaraha Heerka Sare
1 Sifeynta sheyga ZHR1000SD FTTH qalabka wax lagu qaato waxaa si gaar ah loogu talagalay shabakada CATV FTTH. Muuqaalkeeda ugu weyni waa isticmaalka korontada oo hooseeya, soosaarka heerka joogtada ah ee AGC, Volume yar iyo kalsooni sare. Qaadashada qolofka aluminium aluminium ah, oo leh kontaroolka indhaha wareegga AGC ee lagu dhisay, qaab dhismeedka is haysta iyo korontada qaab qaybsan oo dibadda ah ayaa ka dhigaysa rakibidda iyo khaladka mid aad u habboon. Waa shey ku habboon in la dhiso shabakadda FTTH CATV. 2. Muuqaalka sheyga 1. Wuxuu korsadaa moduleka GaAs sida RF ampli ...
Labada Aqbaal ee Qaataha Isha ZBR202
Qalabka wax lagu duubo ee 'ZBR202' waa qalabka wax lagu beddelo ee 1GHz oo laba dhinac ah. Iyada oo leh awood qaabilaad ballaadhan oo ballaadhan, heer wax soo saar sarreeya, adeegsi awood oo hooseeya iyo qaab dhismeed is haysta, fududahay in la rakibo. Waa beddelaad indhaha lagu dhisi karo, markii hal wado ay ku fashilanto ama ka hooseyso xadka la dejiyey, qalabku wuxuu si otomaatig ah ugu beddelayaa wado kale si loo hubiyo shaqada caadiga ah ee qalabka. Waa qalabka ugu habboon ee lagu dhisi karo shabakadda waxqabadka sare ee NGB. Astaamaha 1.Adopt farsamada casriga ah ee AGC; 2.Laba ...
MUUQAALADA Fun Waxqabadka AGC Mode Hawlgalka Qaabdhismeedka Furay Type Nooca Laser: FP ama DFB ■ -20dB Port Imtixaanka ■ 12VDC Adaptive Power ators Muujiyeyaasha Awoodda ee Power ON, Awood gelinta iyo Soo Celinta Tx Codsiyada ■ CATV, shabakadaha HFC ■ RF ee Qeexitaanka Muraayadda ZBR103A node waa goobta ugu haboon ee loogu adeegsan karo shabakadaha FTTH iyo FTTB, iyadoo la gaarsiinayo DOCSIS kor iyo hoos, cod, muuqaal iyo adeeg xawaare sare leh oo ku saabsan barnaamijyada FTTX. ZBR103A waxay leedahay kontorool korodhsan oo si otomaatig ah u shaqeynaya iyo qaab qaab qarxan, u hoggaansamaya ...
FTTH Beddelka Sawirka Korontada ee ZHR28PD
Astaamaha 1. Ballaadhinta Hawlgalka: 45 ~ 1000MHz; 2.marka awoodda isha la gelinayo ay tahay -1dBm: Calaamadda Analogga: Aaladda wax soo saarka indhaha waa 67dBµV (OMI = 4%); Calaamadda Dijital ah: Aaladda waxsoosaarka waxsoosaarka waa 61dBµV, MER> 38dB (EQ waa OFF); 3.Marka awoodda isha la gelinayo ay tahay -10dBm: Calaamadda Dijital ah: Aaladda waxsoosaarka waxsoosaarka waa 43dBµV, MER> 30dB (EQ WAA OFF); waxaa lagugula talinayaa kala duwanaanta awooda korantada indhaha -10 ~ 0dBm. Badeecadani waxay leedahay hal dekedda wax soo saarka RF-ga ah, Metric ama Imperial oo lagu caddeeyay ...
Qaataha Aragtida Dadban
Faahfaahinta taxanaha taxanaha ZHR10P CATV ee telefishanka dhijitaalka ah, fiilada guriga. Mashiinkaani wuxuu qaataa tuubada qaabeeyaha indhaha ee xasaasiga ah, iyada oo aan la helin koronto, isticmaalka tamarta. Waa mid dhaqaale, is-dhexgal codsi dabacsan, adeegsiga faybar shabakadda guriga. Waxaa jira shan nooc oo xulasho nooc ah: Astaamaha Marinka Hawlaha: 45-1000MHz; (1) Marka awoodda isha la gelinayo ay tahay - 1dBm: signal Calaamadda Analogga: Aaladda wax soo saarka indhaha waa 68dBuV (OMI = 4%); Qodo ...
FTTH Aqbalaha indhaha dadban ZHR10B
1.Overview taxanaha ZHR10B beddelaha CATV ee telefishanka dhijitaalka ah, fiibarka guriga. Anigu mashiinkiisu wuxuu qaataa tuubada qaabdhismeedka indhaha ee xasaasiga ah, iyada oo aan la helin koronto, isticmaalka tamarta. Marka heerka soo-saarista awoodda korantada ee indhaha = = 1-1dBm, Vo = 68dBuV, waxay noqon kartaa mid dhaqaale ahaan iyo dabacsanaan u adeegsan karta is-dhexgalka saddexda shabakadood, fiber-ka arjiga shabakadda guriga. Muuqaalka ZHR10B ee dhaldhalaalka, waxaa jira laba nooc oo xulasho muuqaal ah. 2.Features 1) Awood looma baahna 2) Baaxadda shaqada ...
FTTH qaataha indhaha yar leh WDM
Sharaxaadda 'ZHR1000PD' waa dhisme yar oo wax lagu qabtaa oo gudaha ah oo laga dhiso WDM, oo loogu talagalay barnaamijyada gudbinta FTTP / FTTH. Waxay ku bixisaa jawaabo aad u fiican iyo jawaabaha qalloocda oo leh buuq yar, wax soo saar sare oo RF ah, iyo awood koronto yar. Waa hal nooc oo fiber-doofaar dabo ah waxaana lagu heli karaa xulashooyin isku xira kala duwan. Is-dhex-dhexaad No Sharaxaad Sharax 1 RF OUT RF OUT1 F isku xira 2 RF OUT2 ikhtiyaari ah 3 PWR Power adabtarada dekedda 4 PON 1490 / 1310mn interface interface SC / PC ...
ZHR1000P FTTH aqbalana indhaha
Taxanaha ZHR1000P FTTH optic optic wuxuu leeyahay waxqabad sare, awood qaataha qaabilaada oo hooseeya iyo qiimaha hoose ee howlwadeenada CATV oo bixiya tayo sare iyo xalka shabakada FTTH heer sare ah. ZHR1000PD gaar ahaan naqshadeynta arjiga FTTP / FTTH. Waxqabadka sare, awood qaataha qaataha yar iyo qiimaha hoose waa xalka FTTH xulashada ugu fiican ee MSO. WDM waxaa lagu dhex daray 1550nm video signal iyo 1490nm / 1310nm signaal hal feyre ah. Milicsiga 1490nm / 1310nm ee isku xirka qalabka ONT. Aad ayey ugu habboon yihiin ...
ZHR1000MF FTTH Faa'iidada Qalabka Fibre
Shaxanka ZHR1000MF Mini Optical node waa waxqabad sare, kufiican kalsoonida, qarashka ku baxa qarashka yar ee mugga ah, unafiican shabakada Fiber To The Node / Fiber To Home (FTTH). Astaamaha • Iyada oo miiraha kooxda oo kaliya la dhaafiyo 1550nm. • Joogtaynta 40MHz -1002MHz. • Kordhiye sameeyaha 'Gallium arsenide' oo loo adeegsado tusmo waxqabad wanaagsan. • Waxaa jira halbeeg qiyaaseed (ama Ingiriis ah) dekedda wax soo saarka inta jeer ee raadiyaha iyo dekedda korantada ee DC12V ~ 15V oo madaxbanaan. • Aluminium yar yar oo dahaadhka tuurista, qurxinta ...
FTTH WDM Qaataha Fibre indhaha
Halbeegyada Muuqaalka Muuqaalka CATV dhererka dhererka nm 1260 ~ 1620 1540 ~ 1563 Gudub dherer dhererkiisa nm 1310 iyo 1490 Kala-saarista Channel dB -40 1550nm & 1490nm Mas'uuliyadda A / W ≥0.85 1310nm Helitaanka awoodda dBm ≥0.9 1550nm & 1490nm + 2 ~ -Bara log Luminta soo noqoshada indhaha dB + 2 ~ -20 Digital TV (MER ＞ 29dB) ≥55 Fiber indhaha isku xira SC / APC LC / APC RF Feature Work Bandwidth MHz 47-1002 ...